झा’क्रीको मुखमा थु’क्ने मान्छे मा’नसि’क रो’गि थिए त ? हेर्नुस गाउलेहरु भन्छन कु’ट्नु ग’लत हो, अब के होला ? (भिडियो सहित) – Tufan Media News
झा’क्रीको मुखमा थु’क्ने मान्छे मा’नसि’क रो’गि थिए त ? हेर्नुस गाउलेहरु भन्छन कु’ट्नु ग’लत हो, अब के होला ? (भिडियो सहित)
मोरंग। कुरा सुन्दा फिल्म अथवा मनोगडन्ते हावा कुरा जस्तो लागेपनी बास्तबमै मोरङको बेलबारिमा कसैले सोच्नै नसकिने घ’टना घ’टेको छ । एकाएक सबै गाउँले बिरा’मी पर्दै आ’त्मा पसेर दु’ख दिन थालेपछि गाउँ नै चि’न्तामा परेको छ ।
करिब छ बर्ष अगाडी मृ’त्यु भएका जीवन राईको आत्मा हरेक बि’रामीमा पसेर बोल्न थालेपछि गाउँ नै त्रसित बनेको छ ।बच्चादेखि वृ’द्ध सबै बि’रामी परेपछी धा’मी ले चि’न्ता बस्न सुरु गरेको तीन दिनसम्म पनि केही पत्ता नलागेपछि केही गाउँलेहरुले धा’मीलाई कु’टपि’ट समेत गरेका थिए ।
चार दिन चार रात नसुती धा’मी बसेर ढ्याङ्रो बजाएपछी अन्त्यमा छ बर्ष पहिले मोटरसाइकल दु’र्घटनामा नि’धन भएका जीवन राईको चि’हान खनेर हेर्नुपर्ने भनेर झा’क्रीले भनेपछी सु’रक्षाक’र्मी र गाउले बु’द्धिजिबि सहित करिब दुई सय मानिसहरुले रातको 12 बजे चि’हान ख’नेर हेर्दा कसैले नसोचेको दृश्य देखिएपछी सबै गाउलेहरुले धा’मीलाई मा’फी मागेर सम्मान समेत गरेका छन ।
अहिले झा’क्री बि’बादमा आएका छन् , उनले एक मानसिक रो’गि युवालाइ कु’टपि’ट गरेको भन्दै उनलाई गि’रफ्ता’र गरिएको छ। ति युवा मा’नसि’क रो’गि थिए त ? गाउलेहरुले बताए पुरा नालीबेली हेर्नुस ।